Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo dhoweeyay Addis Ababa iyo Ina Iley oo isku agsawirray. – Xeernews24
Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo dhoweeyay Addis Ababa iyo Ina Iley oo isku agsawirray.
3. Mai 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Addis Ababa ee Caasimada Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Bole International Air Port ku soo dhoweeyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Iley iyo Mas’uuliyiin kale.
Soo dhoweynta oo aheyd mid aad u heer sareysay ayaa Madaxweyne Farmaajo waxaa loo garaacay astaanta Calanka Soomaaliya, iyadoo calamada Soomaaliya iyo Itoobiya oo la is hareer suray ay ka banayay garoonka diyaaradaha iyo banaankiisa.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa inta ay joogaan Addis Ababa booqan doono goobo kala duwan oo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Feederaalka Itoobiya.
Booqashadan ayaa ah tii u horeysay ee Madaxweyne Farmaajo ku tago Addis Ababa, isagoo Madaxweyne ah, waxaa uu horay u booqday isagoo Ra’iisul Wasaare ah Bishii December ee sanadkii 2010.
Xidhiidhka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ahaa mid aad u hooseeyay tan iyo markii Madaxweyne Farmaajo la doortay horaantii bishii February, iyadoo xilligaas Itoobiya loo arkayay in aysan ku qanacsaneyn doorashadiisa, si gaar ahna u taageersaneyd Musharaxiin kale.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa lagu wadaa inuu bog cusub u furo xidhiidhka labada dal, kaddib markii uu hoos u dhacay xidhiidhka labada dal, doorashadii Farmaajo.
Booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Itoobiya ayaa noqoneysa tii 6aad, sidoo kale waa dalkii labaad oo uu booqdo wadamada Gobolka ee deriska la ah Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/Farmaajo-Addis.jpg 359 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-03 16:24:002017-05-03 16:24:23Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo dhoweeyay Addis Ababa iyo Ina Iley oo isku agsawirray.
Rayso quuso ma taaqaan,ma’ahee,waa in ay waxqabsato. KHRISO: Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo Heshiis Xasaasi ah ku...